चीनमा अलपत्र नेपाली महिला कामदार : अहिले ती महिला कहाँ छन् ? – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
चीनमा अलपत्र नेपाली महिला कामदार : अहिले ती महिला कहाँ छन् ?
गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको कम्पाउण्डभित्र बस्ने ठाउँ दिएको छ। एउटा कोठामा चारवटा खाट छ जसमा आठजना बस्छन्। उनीहरू भन्छन् हामी काम गर्न जान्दैनौँ हामी नेपाल फर्किन्छौँ।
डान्स रेष्टुराँको कुरा केरुङको हो। अरुतिर चीनमा कहिँपनि त्यस्तो छैन। पहिला तातोपानीको कुरा पनि थियो।